Maxay tahay sababta uu Lionel Messi u doortay inuu xirto lambarka 30-aad ee Kooxda PSG? – Gool FM
Maxay tahay sababta uu Lionel Messi u doortay inuu xirto lambarka 30-aad ee Kooxda PSG?
Haaruun August 22, 2021
(Paris) 22 Agoosto 2021. Lionel Messi ayaa xirtay funaanadda lambarka 30-aad ee PSG oo ah lambar aan laga filanayn, iyadoo la qiyaasay in uu qaadanayo lambarka 10-aad, maadaama xiddiga reer Brazil ee Neymar haatan xiran yahay lambarka 10-aad ee PSG uu horey u sheegay in uu lambarkaasi siinayo Lionel Messi haddii uu rabo.
Haddaba muxuu Messi ku doortay lambarka 30-aad ee PSG? Maxayse tahay sirta ku duugan?
Lambarka 30-aad waa lambarkii ugu horreeyay ee uu xirtay ciyaaryahan Messi markii uu Barcelona ku soo biiray, waxaana waagaas uu Messi ahaa mid aad u xishood badan oo meel gees ah ka fariisan jiray qolka dhar bedelashada Barcelona ee Camp Nou, hase yeeshee waxaa si fiican u soo dhoweeyay labada laacib ee kala ahaa Deco iyo Ronaldinho oo ku qasbay inuu ciyaartoyda kale soo dhex galo, raggana la hadlo, halkii uu keligii meel gees ah fariisan lahaa.
Mar walba Deco iyo Ronaldinho waxay khibraddooda u faa’iideyn jireen Messi, illaa ay ka saareen xishoodkii faraha badnaa, sidaa awgeed waxa uu Messi wareysi hore ku sheegay inuu xushmad weyn u hayo labadaasi laacib ee Deco iyo Ronaldinho.
“Markii ugu horreysay ee aan Barcelona imid waxaan fariistay kursi gees ah, waxaa ii yeeray Deco iyo Ronaldinho, waxaan iri maya geeska aan fadhiyo ayaan ku faraxsanahay wax dhib ah ma lahan, laakiin way iga diideen, waxayna igu qasbeen in aan la soo fariisto.” ayuu Lionel Messi 2015-kii u sheegay Telefishinka kooxda Barcelona, sidaa awgeed isagoo labadaasi halyeey qadarinaya ayuu Messi doortay lambarka 30-aad oo ka dhigan lambar 20 oo uu xiran jiray Deco iyo Lambar 10 oo uu xiran jiray Ronaldinho (20+10 = 30).
Markii uu Messi boos ka helay safka hore ee kooxda Barcelona waxaa loo soo bandhigay inuu doorto funaanad lambarkeedu yahay inta u dhexeysa 1 illaa 25, waxaana Messi uu doortay 19, hase yeeshee 2008-dii markii uu Ronaldinho ka tegay Barcelona, kuna biiray kooxda AC Milan ee Waddanka Talyaaniga waxaa Lionel Messi uu xirtay funanaaddii 10-ka ahayd ee Ronaldinho.
Waqtigaasi Ronaldinho shaki ugama jirin in lambarkiisa 10-aad ee Barcelona uu dhaxli doono Messi oo xilligaa ahaa 21 jir ahaa, sida uu Messi ku sheegay wareysigiisii Telefishinka Barcelona ee 2015-kii: “Intii uusan Ronaldinho ka tegin Barcelona wuu sii ogaa arrimaha qaarkood, sida inaan anigu xiran doono funaddiisii 10-aad ee Barcelona”.
Isku soo wada duuboo Messi waxaa u furnayd in uu qaato funaanadda lambarka 19-aad ee PSG, hase yeeshee waa uu diiday, sidoo kale wuxuu diiday funaanadda Diyeeshaha ama 10-aad ee uu u ballan qaaday Neymar Jr, waxaana aakhirkii uu doortay lambar 30-aad oo waddanka Faransiiska marka la joogo ah funaanadda uu xirto goolhayaha 3-aad, waxayna u muuqataa in Messi oo haatan 34 jir ah uu waayihiisa ciyaareed ku soo xiri doono funaanadda lambarka 30-aad ee uu ku soo bilaabay waayihiisa ciyaareed.
Macallin Ole Gunnar Solskjaer oo sheegay in Manchester United aysan iibin doonin Paul Pogba
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Southampton iyo Man United ee horyaalka Premier League oo la shaaciyay... (Miyaa lagu soo bilaabay Sancho & Varane?)